Izingxenye ezishibhile ezenziwe ngokwezifiso zensimbi zensimbi zokucubungula izingxenye zemishini ifektri kanye nabaphakeli | I-Ouzhan
I-Carbon steel i-iron-carbon alloy enokuqukethwe kwekhabhoni okungu-0.0218% kuya ku-2.11%. Ebizwa nangokuthi i-carbon steel. Ngokuvamile, iqukethe nenani elincane le-silicon, i-manganese, isulfure ne-phosphorus. Ngokuvamile, ukuphakama kokuqukethwe kwekhabhoni yensimbi yensimbi, kukhula ubunzima kanye namandla amakhulu, kepha ukwehla kwepulasitiki. I-Carbon steel CNC milling inezinhlobo ezahlukahlukene zezicelo futhi ilungele izingxenye eziningi zemishini.
CNC lathes kungaba ukucubungula eziyinkimbinkimbi ligijima bobunjwa umzimba. Ezingxenyeni zokugaya zensimbi yensimbi, okungenalutho kulungisiwe, futhi kusetshenziswa umshini wokusika wokugaya ohamba ngesivinini esikhulu ukuhambisa okungenalutho kokungenalutho ukusika ubujamo nezici ezidingekayo. Izingxenye zokugaya izingxenye zemishini zikulungele kakhulu ukucubungula izinhlobo zomsebenzi zokusebenza ezifana nezingxenye ezigobile namathuluzi wokwenza amathuluzi agobile. Izingxenye ezigobile zisetshenziswa kakhulu emkhakheni wezezimboni, njengama-turbine blades, ama-propellers wemikhumbi, imikhiqizo yezimboni enezindawo eziyindilinga eziyindilinga, njll. I-Ouzhan inikeza izinsizakalo zezinsimbi zensimbi zensimbi ezenziwe ngezifiso zamakhasimende anenani.
Izinzuzo Shanghai Ouzhan carbon steel izingxenye ogayiwe
Langaphambilini Umkhiqizi waseChina u-CNC owenziwe ngezifiso izingxenye zensimbi yensimbi yekhabhoni
Olandelayo: Izingxenye ze-OEM zensimbi zensimbi zokugaya izimboni
OEM engagqwali CNC machining izingxenye for sta ...